Sudoku 🥇 Midira ary mankafiza amin'ny emulator.online
Sudoku dia lalao toa piozila isa. Mandrisika ny fisainana lojika-matematika sy ny fisainana stratejika. Amin'ny voalohany dia mety ho toa sarotra be izany, saingy ho hitanao fa miaraka amina fanazaran-tena kely, ny fahafantarana ny paikady mifanaraka amin'izany, dia ho mora kokoa sy hampiala voly kokoa isan'andro izany.
Sudoku: ny fomba filalaovana tsikelikely 🙂
Ho hitanao a kianja goavambe izay mizara kianja kely maromaro, ary ireo efamira kely ireo dia atambatra ho efamira afovoany. Ny efamira antonony tsirairay dia misy efamira kely 9 ao anatiny.
Ny tanjon'ny lalao dia ny mameno ireo kianja tsy misy isa miaraka amin'ny isa, ka:
Tsipika rehetra (marindrano) manana ny isa rehetra hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 9, nefa tsy averimberina.
Tsanganana rehetra (mijidina) manana ny isa rehetra hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 9, nefa tsy averimberina.
rehetra efamira afovoany manana ny isa rehetra izy ireo manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9, nefa tsy averiny intsony.
Inona no atao hoe Sudoku?
Amin'ny teny japoney tsara, ny anarana fantatsika rehetra dia tsy inona fa fanamorana ny andianteny "suji wa dokushin ni kagiru", inona no dikan'izany "isa dia tsy maintsy miavaka"Ary entina ilazana fotoana fialam-boly tsotra dia tsotra miaraka amin'ny torolàlana tena tsotra izay ny tanjona dia ny hameno ireo boaty banga rehetra amin'ny alàlan'ny filaharana isa milamina. Izany dia mitaky lojika sy fisainana momba ilay vahaolana.
Tantara Sudoku 🤓
Na eo aza ny anarany, sudoku dia tsy noforonina tany Japon, ilay noforonina dia avy amin'ny matematika soisa Leonhard Euler. Tamin'ny taonjato faha-XVIII, namorona ilay nantsoiny hoe "efamira latina", lalao iray izay tsy maintsy isehoan'ny tarehimarika indray mandeha isaky ny andalana sy isaky ny tsanganana. Laharana 9 sy tsanganana 9 nanjary nalaza rehefa nanomboka navoaka tany Etazonia. Tamin'ny taona 1970.
Teo izy tao 1984, rehefa ny Japoney Nihaona tamin'ny lalao i Maki Kaji. Rehefa tafaverina tany amin'ny tanindrazany, Nanatsara ny lalao i Kaji (Nomeny ny tarehimarika famantarana, izay efa niseho tao anaty boaty, ary namorona ambaratongam-pahasarotana samihafa, nanao batemy azy ary namadika azy ho tazo teo amin'ireo mpiray tanindrazana aminy: ankehitriny dia manana magazine maherin'ny 600,000 i Sudoku manokana any Sudoku.
Tany Andrefana dia lasa adala ny filokana tamin'ny 2005. Ny dingana voalohany dia noraisina tamin'ny 1997, raha ny New Zealander Nitsidika an'i Japon i Wayne Gould, nahalala momba an'i Sudoku ary namolavola programa informatika ho an'ny lalao, navoaka tamin'ny 2004. 8 volana lasa izay, nanomboka navoakan'ny gazety The Times isan'andro ny famoronana azy, izay narahin'ny fifaninanana erak'izao tontolo izao.
Karazana sudoku ankoatry ny mahazatra:
Diagonal: Mba hilalaovana dia tsy maintsy manaraka ny fitsipika mitovy amin'ny Sudoku nentim-paharazana ianao, izany hoe fenoy ny kianja rehetra amin'ny alàlan'ny isa manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9, tsy misy famerimberenana amin'ny tsipika mitsivalana sy mitsangana. Ny lafiny miavaka indrindra amin'ity ankamantatra sudoku ity dia, ankoatry ny fampifandraisana ny tsipika mitsivalana sy marindrano, dia tsy maintsy manamboatra diagonaly afovoany roa mamorona X ianao, miaraka amin'ny isa 1 ka hatramin'ny 9 ary tsy mamerina ny tenany intsony izy ireo.
tsy ara-dalàna: manana fitsipika mitovy amin'ny kilasika izy, afa-tsy ny kianja tsy ara-dalàna.
Kakuro: Tsy dia sarotra loatra ny milalao kakuro, na dia heverina ho sarotra kokoa noho ny sudoku aza izany. Ny tanjona dia ny fametrahana ny isa 1 ka hatramin'ny 9 amin'ny fomba izay tsy averina intsony amin'ny filaharan'ny tsipika sy ny filaharan'ny tsanganana, ilaina fa ny fitambaran'ny isa (mitsivalana na mitsangana) dia mitovy amin'ny teboka mifandraika .
mpamono Olona: fitambaran'i Sudoku sy Kakuro izy io. Noho izany, misy faritra voafaritra ka tsy misy isa miverina ary izay vola tokony hanome ny sandany voalaza.
Megasudoku: tokony ataonao miseho indray mandeha isaky ny andalana sy tsanganana ary toradroa ireo tarehimarika 1 ka hatramin'ny 12. Mitovy amin'ilay nentim-paharazana fa manana isa telo hafa.
Minisudoku: Izy io dia tsy mitovy amin'ny nentim-paharazana amin'ny alàlan'ny fananganana efamira kely kokoa.
Multisudoku: Izy io dia mazàna amin'ny Puzzles sudoku maromaro izay mahaforona iray.
Torohevitra hamahana an'i Sudoku 🙂
Ny zavatra voalohany tokony hatao hanombohana mamaha an'i Sudoku dia mifidiana endrika hitarika anao (laharana, tsanganana na toradroa). Raha tsy mifantina iray fotsiny ianao ary manandrana manao ny zava-drehetra indray mandeha, dia mety hiafara amin'ny fikororohana sy hampisavorovoroana ny zava-drehetra, izay haharitra kokoa amin'ny lalao.
Lazao, ohatra, nisafidy ny hamaha amin'ny tsipika ianao. Avy eo ianao dia handinika ny tsipika marindrano voalohany ary hahita izay tarehimarika efa eo aminy sy izay tsy hita. Fenoy ireo efamira tsy misy naoty miaraka amin'ireo isa tsy hita, mandinika ireo tarehimarika ao amin'ny tsanganana mba hahazoana antoka fa tsy hamerina azy io.
Rehefa avy namaha ny andalana voalohany, mankanesa any amin'ny tsipika faharoa ary avereno ny dingana. Jereo hoe inona ny isa efa anananao ary iza amin'ireo no tsy ampy hanombohana hamenoana. Raha tsy manana ny isa 1 amin'ny andalana faharoa ianao dia mankanesa any amin'ny kianja foana voalohany ary manorata 1. Avy eo jereo ny tsanganana amin'io kianja io. Raha efa misy ao amin'io tsanganana io ny isa 1, esory izy ary soraty amin'ny kianja hafa ny 1. Aza adino ny manamarina foana raha tsy mamerina isa izay efa eo amin'ny kianja ianao.
Araho hatramin'ny farany io gadona io, ary afaka manangana ny lalao Sudoku ianao. Amin'ny farany dia mihasarotra kokoa ny mitady toerana mifanaraka amin'ny tarehimarika nefa tsy averimberina intsony, fa misy manandrana manova ny nomeraon'ny toerana fotsiny hanamorana azy
Sudoku: paikady 🤓
Ireto misy toro-hevitra sy paikady tsotra hanampy anao hamaha ny ankamantatra Sudoku.
Miaraka amin'ny marika
Amin'ny fampiasana marika dia azonao ampiasaina ireto torohevitra tena tsotra ireto (ary miharihary aza):
Amin'ny fotoana rehetra, jereo akaiky ny lalao ho an'ireo sela izay manana isa iray monja amin'ireo marika. Midika izany fa iray ihany ny mety ho an'io sela io.
Isa miafina fotsiny
Matetika mijery akaiky dia mahita "isa miafina fotsiny". Ity isa ity dia tsy miseho afa-tsy amin'ny marika fotsiny. Izy irery no mety ho mpifaninana amina laharana, tsanganana na gropy 3x3, eo afovoan'ny isa hafa ihany no isehoany. Jereo ny sary eo amin'ny ilany:
Amin'ity sary ity dia hitanao fa ny isa 1 sy 8 dia tsy miseho afa-tsy indray mandeha amin'ny tadiny 3x3 tsirairay avy. Midika izany fa tsy maintsy apetraka amin'ireo toerana ireo izy ireo.
1. Raha isaky ny fotoana dia tsy hitanao afa-tsy ny marika amina vondrona iray (laharana, tsanganana na tsipika) no fahitanao ny vanim-potoana mitovy amin'izany, dia midika izany fa ity mpivady ity dia tsy maintsy hita ao amin'ireo sela roa ireo. Jereo ny sary etsy ambany:
2. Amin'ity sary ity dia hitantsika fa ny isa 1 sy 3 dia miseho irery amin'ny sela roa, noho izany dia tsy maintsy ampiasaina ao amin'ireo sela ireo izy ireo. Tsy fantatsika hoe inona ny isa mandeha isaky ny sela. Na izany aza, fantatray fa ny isa 1 sy 3 dia tsy afaka miseho amin'ny sela poakaty hafa. Noho izany, manana vintana iray ihany isika amin'ny tsirairay.
Tsy misy marika🤓
Ho an'ireo izay tsy te hampiasa marika dia hanazava paikady tena tsotra sy tena ilaina izahay.
Ny teknikan'ny tsipika miampita dia mety ny zavatra voalohany ianaran'ny olona rehefa milalao Sudoku izy ireo. Mianatra ny mpilalao amin'ny fanaovana, satria tsotra sy fototra izany.
Ao aminy, ny mpilalao dia tsy maintsy misafidy isa iray (mazàna ilay iray misy indrindra amin'ny lalao) ary manoritra tsipika an-tsary eo amin'ireo tsipika sy tsanganana misy an'io isa io.
Amin'ity ohatra manaraka ity dia safidintsika ny isa 9. Hitanay ny toerana misy azy rehetra ary soratantsika eo amin'ny tsipika sy ny tsanganana ireo andalana an-tsaina hanondroana fa ny isa 9 dia tsy azo apetraka amin'ireo toerana ireo. Vantany vao vita io dia manamarika ireo toerana malalaka amin'ny loko maitso isika.
naoty : Zava-dehibe ny manamarika fa ny sela poakaty sasany, na dia tsy nongotan'ny tsipika an-tsaina aza izy ireo, dia tsy nasiana mari-pahaizana maimaimpoana satria manana ny isa 9 ao amin'ny valiny 3x3 mitovy.
Amin'ny fijerena ireo toerana malalaka dia hitantsika fa ao amin'ny valin'ny 3x3 afovoany dia misy toerana iray malalaka fotsiny ho an'ny isa 9, mba hahafahantsika mametraka azy amin'izany.
Vantany vao vita izany dia averintsika ny fizotran'ny tsipika an-tsaina momba ny isa izay napetrakao. Zahao ny valiny:
indray tsy maintsy dinihintsika ny toerana malalaka hikarohana hetsika vaovao. Araka ny hitantsika, amin'ny faritra afovoany ambany dia iray ihany ny toerana malalaka. Avy eo isika dia afaka mametraka ny isa 9 ary mamerina ny fomba etsy ambony.
Tamin'ity indray mitoraka ity dia nisy toerana malalaka iray niseho teo amin'ny zoro ambany havia, noho izany dia nametraka 9 tamin'io toerana io izahay ary nanohy ny paikady.
Ankehitriny dia hitantsika fa manana toerana malalaka efatra ho an'ny isa 9 isika, ary tsy misy miavaka amin'ny takelaka 3x3 misy azy. Noho izany, tsy fantatray izay hametrahana ny 9 amin'ny fampiasana an'ity paikady ity irery.
Ny fomba iray azo atao dia misafidiana isa vaovao ary avereno ity paikady vao nofaritana ity. Mety ho azonao atao ny mameno ny ankamaroan'ny sela amin'ny alàlan'ity paikady ity fotsiny.
Ankehitriny manana paikady vitsivitsy ianao, manaova fialamboly ary ampiasao ny atidohanao amin'ny filalaovana an'i Sudoku.🙂
Sudoku dia lalao mitaky fotoana sy eritreritra kely, fa rehefa fantatrao ny lalàna, dia lasa mora ny milalao.
Sudoku amin'ny ankapobeny misy latabatra 9x9, izay amboarina ao Grid 9, manana izany Sela 9 tsirairay avy.
Ny hevi-dehibe amin'ny lalao dia ny mpilalao ianao dia tokony hameno ny latabatra amin'ny isa manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9, tsy misy famerimberenana isa amin'ny tsipika na kofehy mitovy.
Raha manaraka ireo fitsipika rehetra ireo ianao ary mahavita mameno ny latabatra, dia mandresy ny lalao!
Latabatra Sudoku dia natao hanana vahaolana tokana Ary toy izany dia ara-dalàna ny tsy fahazoantsika azy voalohany.
Noho io antony io ihany dia aleon'ny ankamaroan'ny mpilalao manoratra ireo isa amin'ny pensilihazo mba hamafana azy ireo raha nanao hadisoana izy ireo.
Soso-kevitra iray hafa tokony hodinihina ny fampiasana marika. Amin'ny marika, ny tianay holazaina dia ny manoratra ireo fahafaha-manao isan-karazany ao anatin'ny sela tsirairay. Izany hoe raha misy sela manana ny isa 3 sy 9, ny idealy dia ny manondro (amin'ny habe kely) ny isa roa ary hamaha ny ambin'ny latabatra, mandra-pahatongan'ny isa mifanitsy amin'io sela io.
Amin'ny kinova sasany an'i Sudoku, ireo marika kely ireo dia efa tafiditra ao anaty latabatra mba hanamorana ny famahana azy ireo. Ao amin'ireo kinova izay efa misy marika ireo dia misy fika vitsivitsy izay hanampy anao hamaha ny piozila:
Isaky ny ao anaty latabatra Sudoku (misy marika) dia mahita isa fotsiny ianao ao amin'ny sela iray, ity dia a famantarana fa iray ihany ny mety ho an'io sela io ihany, izany hoe tsy maintsy miantso an'io nomerao avy hatrany ao anaty sela ianao.
Indraindray i Sudoku dia mety ho lalao sarotra, saingy misy fika kely hanampiana antsika hamantatra ny lalao. Ohatra, amin'ny lalao misy marika dia hitantsika indraindray ilay antsoina hoe "isa miafina fotsiny".
Ity isa ity dia tsy miseho afa-tsy ao amin'ny sela (miaraka amina isa hafa), fa io ihany no mety ho mpifaninana amina laharana, tsanganana na gropy 3x3.
Izany hoe, rehefa ao anaty valan-tserasera 3x3, ohatra, ny isa 3 dia miseho ary tsy miseho amin'ny sela hafa ao amin'io takelaka io, dia famantarana izany fa ilay isa 3 dia ao amin'io sela io ihany.
Raha mbola mahita ny tarehimarika mitovy aminy ihany ianao amin'ny mariky ny kofehy 3x3, dia midika izany fa voatery io mpivady io dia tsy maintsy misy ao amin'ireo sela roa ireo, ny fanontaniana mipetraka fotsiny eto dia ny hoe iza avy no ho ao amin'ny tsirairay.
Raha tsy mitondra marika ny dikantenanao Sudoku na raha tsy te hampiasa marika ianao dia misy paikady tsotra hafa manampy anao hahay ity lalao ity.
Ny teknikan'ny tsipika miampita dia be mpampiasa, noho ny fahatsorany lehibe amin'ny fampiasana azy. Misy ao safidio ny isa izay miseho matetika indrindra amin'ny latabatra iray manontolo ary ataovy sary (amin'ny pensilihazo mba tsy hifangaro) tsipika amin'ny tsipika sy tsanganana izay ampifandraisin'io isa io ihany.
Rehefa avy nisintona ny tsipika rehetra isika, dia mandroso amin'ny dingan'ny fanamarihana ireo sela izay tsy rakotra ao anatin'ireo tsipika ireo. Avy eo, dinihina izay gridisy 3x3 tsy manana ny isa 9 ary iza no manana toerana (tsy mivoaka) hametrahana azy.
Vantany vao vita izany, misafidiana isa hafa ary avereno io paikady io ihany, mandra-pameno ny sela rehetra. Amin'ny farany, mila manamarina ianao raha misy isa miverimberina mitovy amin'ny tsipika na ny takelaka. Raha tsy misy isa miverimberina dia mandresy ny lalao.
Milalao fotoana sy fahasarotana
Tsy misy fotoana ambony indrindra ho an'ny piozila Sudoku tsirairay, ary ny mpilalao tsirairay dia afaka mankafy ny lalao raha mbola tadiaviny.
Lalao Sudoku afaka miovaova eo anelanelan'ny 5 sy 45 minitra, fa miankina amin'ny traikefan'ny mpilalao sy ny haavon'ny fahasasaranan'ny lalao izany. Raha tsorina, arakaraka ny sarotra ny lalao no ilaina ny fisaintsainana bebe kokoa, ka haharitra kokoa ny lalao.
Raha ny amin'ny fahasahiranana, mazàna dia mazava ao amin'ny lohatenin'ny tranonkala na ny magazine izany. Misy lalao mora ho an'ny vao manomboka ary tena sarotra ho an'ny mpilalao za-draharaha kokoa. Ho an'ireo manam-pahaizana, ny ambaratonga sarotra kokoa dia mety ho tena sarotra, satria ny ambaratonga dia manomboka hita ho tena simetrika, izay toa hita taratra ny isa. Noho izany, ho fanampin'ny fanjohian-kevitra fototra, mila paikady iray ihany koa ianao.
Ary noho izany dia namarana ilay lahatsoratra. Arahabaina! Fantatrao izao ny fomba filalaovana Sudoku, na farafaharatsiny manana fahalalana ampy hamahana ireo piozila ireo ianao!